स्वास्थ्य Archives - Page 164 of 180 - Purbeli News
यी हुन् धमनी र नसाकाे समस्याका कारण लाग्ने ६ रोग
कुनै व्यक्तिमा भास्कुलर सिस्टम (रक्तप्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका भएका धमनी र नसा) सम्बन्धी समस्या छ भने त्यसलाई भास्कुलर रोग भनिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा गरिने सर्जरीलाई भास्कुलर सर्जरी भनिन्छ । भास्कुलर सर्जरीका क्रममा धमनी र नसामा भएका क्षति र आएका समस्यालाई शल्यक्रियाका माध्यमबाट उपचार गरिन्छ । ओपन सर्जरीलाई भास्कुलर सर्जरी भनिन्छ भने सानो प्वालमात...
प्लास्टिकमा आन्द्रा बोकेर हिँड्ने राईको निःशुल्क उपचार, पाए नयाँ जीवन
पथरी – खर्च अभावमा उपचार नपाएर शरीर बाहिर निस्किएको आन्द्रा प्लास्टिकमा बेरेर हिँडेका मोरङ मिक्लाजुङ–१ साम्पाङ टोलका मनबहादुर राईको विराटनगरस्थित नोबेल अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरेपछि नयाँ जीवन पाएका छन्। ४० वर्षीय राईले उपचारका लागि आवश्यक रकमको अभावमा उपचार गर्न नपाएको विषयलाई राससले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । राससले ‘आर्थिक अभावमा प्लास्टिकक...
यी चिजहरु भुलेर पनि फ्रिजमा नराख्नु हाेला
फलफूल, तरकारी र खानालाई सड्न, गल्न नदिन फ्रिजमा राख्ने गरिन्छ । तर, केही चिजलाई फ्रिजको सट्टा बाहिर खुला हावामा राख्नु राम्रो हुन्छ । फ्रिजमा राखेका यस्ता खाना खाने गरेमा शरीरलाई हानि पनि पुग्न सक्छ । फ्रिजमा राख्न नहुने केही चिजबिज यस्ता छन्ः – केरा, स्याउ, सुन्तला, एभोकाडो – मह – कागती – लसुन, प्याज – पाउरोटी – ...
काठमाडौँ / नेपालमा चिकित्साविज्ञानको क्षेत्रमा पहिलो पटक मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको अङ्ग झिकी अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गरिएको छ । भक्तपुरस्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले गत बिहीबार जिप दुर्घटनामा परी मस्तिष्क मृत्यु भएका सिन्धुलीका ३० वर्षीय गोविन्द भुजेलका दुई मिर्गौला दुई व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले...
घ्यु कुमारीको गुदी पाइल्सका रोगीका लागि धेरै उपयोगी हुन्छ। पाइल्सका कारण मलद्वार दुख्ने वा पोल्ने हुन्छ। त्यसैले विस्तारै घिउकुमारीको गुदी लगाउने जसले शीतलता प्रदान गर्छ। बदामको तेल अर्थात् बदाम रोगन पनि लगाउन सकिन्छ। एक दिनमा ३-४ पटक मलद्वारमा बदामको शुद्ध तेल लगाए आराम मिल्छ। पाइल्सका रोगीले तारेको-भुटेको तथा रेशारहित खाना खानु हुँदैन। कब्जियत ह...
मुखमा र जिब्रोमा खटिरा आयो ? यसो गर्नुहोस
काठमाडौं । मुखमा साना बिबिरा, मसिना सेता खालका फोकाफोकी देखिएमा तपाँइलाई निकै सताउँछ होला । मुखभित्र, जिब्रो, गिजा, ओठलगायत मुखको कुनाकानी र कहिलेकाहीँ गालाको छेउसम्म पनि घाउ हुन्छ । यस्तो घाउ स–सानो एक वा धेरै मात्रामा आउन सक्छ । त्यस्तै यो समस्या बढेर जटिल भई घाऊ ठूलो र गहिरो भएर खान बोल्नै नहुने किसिमको पनि हुन सक्छ । यसले गर्दा लगातार दुख्ने, प...
दादले सताएको छ ? यसरी पाउनुहाेस् छुटकारा
अनुहार सुन्दर तर त्यहिमाथि निस्केको फुस्रो दादले रुपै बिगारिदिएको हुन्छ । कतिपयको शरीरका विभिन्न भागमा निस्किएको दाद । यसले शरीरको सौन्दर्यमा आघात त पार्छ नै बढदै जाँदा थप समस्याहरु नित्याउँदै जान्छ । छालारोग विशेषज्ञ डा सविना भट्टराईले दादको समस्या र जोगिने उपाय बारेमा केही टिप्स दिएकी छन् । हेरौँ उनका टिप्सहरु: दाद भएको ठाँउमा खराब औषध...
गर्भावस्था : गर्भावस्थ या शिशु जन्मिसकेपछिको अवस्थामा बेसारको प्रयोग महिलाका लागि हानिकारक हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा बेसार खाँदा मासिक धर्म रोकिने तथा अन्य समस्या निम्तिन सक्छ । बेसारले गर्भाशयलाई उत्तेजित या सक्रिय पार्न भूमिका खेल्छ । बेसारले टेस्टोस्टेरोन हर्मोन कम गर्न पनि सहायक भूमिका खेल्छ । पत्थरी : पित्ताशयमा पत्थरी भएका वेला ...
मोरङ / विराटनगरमा रहेको नोेबेल अस्पतालले २० किलोको ट्युमर भएको व्यक्तिको सफल शल्यक्रिया गरेको छ । अस्पतालले सुनसरीको दुहवी–१ का मोहम्मद इस्ताकको कानको पछाडिको भागमा रहेको ट्युमरको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । अस्पतालका वरिष्ठ न्युरोसर्जन डा आइप चेरियन नेतृत्वको टोलीले इस्ताकको ट्युमरको सफल शल्यक्रिया गरेको र यस्तो शल्यक्रिया कमैको हुने गरेको शुक्रबार ...
उदयपुर जिल्ला अस्पतालमा सल्यकृया सेवा सुरु
उदयपुर / प्रसुतिको मात्र सल्यकृय गरिदै आएको जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा शुक्रबारदेखि पहिलो पटक अन्य विरामीको सल्यकृया सेवा सुचारु गरिएको छ । सेवा सुचारु गरेको पहिलो दिन शुक्रबार दुई महिलाको सफल सल्यकृय भएको हो । एपेन्डिसाइटिसको समस्या लिएर जिल्ला अस्पताल पुगेकी त्रियुगा नगरपालिका ४ वगाहाकी ४५ बर्षीया भिमकुमारी मगर र जन्मजात दाहिने हातमा मासु पलाएर रोगस...